JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ်ကြောင့် ရှမ်းအမျိုးသမီး ၂ ဦးသေဆုံး
အောက်တိုဘာ (၁၆) အင်္ဂါ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေဖြစ်သော မူဆယ် နှင့် နမ့်ခမ်းကြား နမ့်ဂျောန်ရှမ်းရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း ပုန်းအောင်းနေရာယူနေသော ဗမာအစိုးရ စစ်သားနှစ်ဦးမှ ရှေ့တန်းစခန့်သို့ မသွားချင်သောကြောင့်း အောက်တိုဘာ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ထွက်ပြေးသွား ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တစ်ဦးကိုမူ ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိပြီး မတရား ညှင်းပန်း နှပ်စက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်တစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးစဉ် အိမ်ပေါ်မှခုန်ချသောကြောင့် ခြေထောင်တစ်ဘက် ကျိုးသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
နမ့်ဂျောန် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ရောက်ရှိပုန်းအောင်းနေသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် မှရှမ်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦး ကိုထမင်းချက်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်ထားကြောင်းနှင့် ဤရှမ်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလည်း အချိန်ပြည့် ချိမ်းခြောက် ဆဲဆို ကျိန်းမောင်းကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အောက်တိုဘာ (၁၅) ရက်မနက် (၇း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှ ဗမာစစ်သားများအတွက် နမ့်ခမ်းသို့ မနက်စာ သွားအ၀ယ်တွင် စီးလာသော ဆိုင်ကယ်နှင့် ထော်လာဂျီဝင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် ရှမ်းအမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ပွဲခြင်းပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း ဆက်လက်သတင်းရရှိပါသည်။
Two Burmese soldiers deserter rearrested in Nam Jawn Shan village, Between Nam Hkam and Muse, which is under the KIA (4th ) brigade area on (15) October, said the villagers. When The Burmese Solders encamped in Nam Jawn Shan village’s monastery, the two solders deserted from that village because they didn’t want to march to the battle with KIA, but one solder was rearrested and tortured severely and the other one was broken the leg while he was jump down from the house. And the Burmese troop called two Shan female to cook for them and the Burmese soldiers were always cure the two Shan cook. At 07:00 AM, when the two Shan cook went with motor cycle to buy food for the solders, they bumped with the car from the opposite side as an accident, the two cook died on the spot on that day.
Shan!!!!! Get up and fight to Junta, don't be afraid, the Kachin army will help you.